Ini Handidi Kunzwa Yako Damn Nyaya | Martech Zone
Ini Handidi Kunzwa Yako Damn Nhau
Chipiri, August 28, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nguva yekuita rant. Iyo nyowani buzzword kwese pasocial media uye yemukati yekutengesa nzvimbo iri Storytelling. Isu takagovana mamwe infographics pa kutaura nyaya pamwe nekambani kutaura uye visual storytelling… Uye ndiri shasha yekutaura nyaya. Nevateereri chaivo, hapana chinhu chiri nani kupfuura nyaya yakanaka yekubatana nevateereri vako.
Asi isu tave kushandisa iyo nyaya nezvese. Logos inofanirwa kutaura nyaya. Mhando dzinofanira kutaura nyaya. Graphics inofanirwa kutaura nyaya. Infographics inofanirwa kutaura nyaya. Yako webhusaiti inofanirwa kutaura nyaya. Yako blog posvo inofanirwa kutaura nyaya. Chirongwa chinofanirwa kutaura nyaya. Iyo mharidzo inofanirwa kutaura nyaya.
Zvakwana nenyaya dzedamn, izvozvi! Kungoti nekuti mumwe guru pane imwe nzvimbo akataura nezvekutaura nyaya hazvireve kuti iri zano rakakodzera renzvimbo yega yega yekutengesa nevateereri. Zvinondiyeuchidza nezve chiitiko muHupenyu hwaBrian… iyo Bhutsu Chiratidzo!
Sezvo shangu yacho yanga isiri chiratidzo kubva kuna Brian, kana kutaura nyaya ndiyo mhinduro kumatambudziko ako ese ekutengesa. Ndinoziva vamwe vanhu vanonamata aya ekushambadzira gurus… asi tora mazano avo nekauri yemunyu. Ivo havazive chako chigadzirwa, yako indasitiri, yako mitengo, zvako zvakanaka nezvakaipa, uye zvinosetsa - ivo havazive nyaya dzevatengi vako.
Dzimwe nguva, ini handidi nyaya - ini ndanga ndatonzwa nyaya yacho.
Dzimwe nguva, ini handidi nyaya - ini ndinongoda kusaina online.
Dzimwe nguva, ini handidi nyaya - ini handina nguva yekuteerera.
Dzimwe nguva, ini handidi nyaya - ini ndinongoda kuona maficha.
Dzimwe nguva, ini handidi nyaya - ini ndinongoda kuziva mabhenefiti.
Dzimwe nguva, ini handidi nyaya - ndinoziva vatengi vako uye ndinoda chigadzirwa chimwe chete.
Dzimwe nguva, ini handidi nyaya - ini ndinongoda kuona demo.
Dzimwe nguva, ini handidi nyaya - ini ndinongoda kuyedza.
Dzimwe nguva, ini handidi nyaya - ini ndinongoda kuziva kuti yakawanda sei.
Dzimwe nguva, ini handidi nyaya - ini ndinongoda kuitenga.
Nhoroondo zvakaoma uye zvinoda tarenda chairo rekugadzira mifananidzo mune zvinyorwa, mifananidzo kana vhidhiyo kuona kunzwisisika. Iyo nguva, matauriro, mavara ... zvese zvidimbu zvinofanirwa kuve munzvimbo kuti nyaya ishande uye kubata chaiko vateereri vakasiyana-siyana vauri kutaura navo.
Mwedzi mishoma yapfuura, ndakaita ongororo pane chigadzirwa chakaonekwa kugadzirisa nyaya dzataive tichiita nemutengi. Ndaiziva kuti muridzi aibhadhara marii. Ndakaziva kuwanda kwedambudziko kwaivadya. Ini ndaiziva mari yakawanda yandaive ndakuda kubhadhara kubvisa nyaya. Iyo saiti yanga isina ruzivo rwese rwakakodzera, zvikasadaro ndinogona kunge ndazosaina ipapo ipapo ... asi ndaifanira kusaina demo.
Mushure mekunge ndanyoresa demo, ini ndakagashira pre-qualifying foni kwandakabvunzwa nhevedzano yemibvunzo. Mushure meye litany remibvunzo, ndakanyunyuta uye ndakangobvunza demo. Ndaifanirwa kupedza kupindura mibvunzo. Kana ndapedza, ndakaronga demo. Zuva kana kuti gare gare, ndakasvika pakudaidzira demo, uye mutengesi akavhura dhizaini yake yetsika yakagadzirirwa yangu nounhu ndokutanga kuudza iyo nyaya.
Ndakavakumbira kuti vamire. Akaramba.
Ndakabvunza kana taizoita demo, iye akanzvenga mubvunzo. Saka ndakamuudza kuti ave nemanager wake anondisheedza ndichibva ndadimbura runhare. I was now frustrated. Maneja wake akadana uye ini ndakamukumbira kuti aratidze chete software, ndichitsanangura kuti kana mari yacho yaive mukati mebhajeti yangu uye kana software ikagadzirisa dambudziko, ndanga ndakagadzirira kutenga.
Akandiratidza demo. Akandiudza mutengo. Ndakaita kutenga.
Pakupera kwekufona, akabvuma kuti aizodzoka agadzirise maitiro ekutengesa kuti awane makambani seangu.
Ndichiri kutenda basa rose rinoshamisa rinofanira kunge rakaitwa nechikwata chake kuti riongorore mibairo yekukunda / kurasikirwa, kusimudzira munhu, kunyora nyaya kune avo vanhu, kumisikidza zano rekutanga uye kundipa nyaya yaive yakamanikidza kuti nditenge… vaisada kana kuda chero chazvo. Ndakanga ndisina nguva yenyaya. Ini ndaingoda mhinduro.
Usatore izvi nenzira isiri iyo, nyaya dzine nzvimbo yadzo mukushambadzira. Asi Storytelling haisi iyo nzira yekushambadzira. Vamwe vevashanyi vesaiti yako havasi kutsvaga nyaya ... uye vanogona kutogumbuka uye kudzimwa nayo. Vape dzimwe sarudzo.
Zvino izvo rant yapera, iyi inyaya yakashata nyaya yauchazoda kuverenga… shamwari yangu (uye mutengi), Muhammad Yasin naRyan Brock tarisa nhoroondo refu yevanhu vakataura nyaya kwayo panguva yakakodzera. Verenga pamwe sezvavanotsvaga nyika yemagariro midhijidhi uye tarisa kune zvakapfuura kuti uzive kuti kana zvasvika kune hunyanzvi hwekutaura nyaya, pane hapana chitsva pasi pezuva.
Tora kopi ye Hapana Chitsva: Iyo Irreverent Nhoroondo yekutaura Nhau uye Yemagariro Midhiya.
Tarisa Vashanyi Bhurawuza, Tarisa kunze, Tenga muNguva Yechokwadi!
Ungaita Sei Kuti Uve Mobile App Inogadzira
Huru hombe chapeau.
Zvekuita kuti ndisekwe musoro wangu uchibva pano.
Ndatenda @ twitter-16882886: disqus!
Douglas, nzira yakanakisa yekutsanangura kuonga kwangu kwechinyorwa ichi inyaya diki. Pane imwe nguva ndanga ndichishandisa zvishandiso kutenderedza Twitter ndikaona iri zita risinganzwisisike, "Ini Handidi Kunzwa Yako Yakashata Nyaya. Saka ndakaverenga nyaya iya ndikaseka zvangu. Uye ini ndakagara ndichifara nekusingaperi.
@AstroGremlin: disqus yakanyanya kukosheswa! 🙂
Nhau dzakanaka, asi isu tiriwo munyika yeanonzwika kurira uye mavara zana nemakumi mana. Multi-track sarudzo dzinobatsira. Yangu yazvino blog posvo yakafuridzirwa naRupert Bear makatuni, ane pikicha, nhetembo uye prose, akashanda zvakanaka nevana vangu. Marefu-kopi mapeji ekumhara, semuenzaniso, akanaka kune SEO uye nevamwe vaverengi, asi vhidhiyo uye yekutanga 'kutenga-ikozvino / inotevera-nhanho' bhatani inopa dzimwe nzira dzekufamba.
@markstonham: disqus Ini ndichiri kuda refu-kopi… asi sekutaura kwako, sarudzo dzinobatsira. Ndatenda!
Iyo Hoffman Agency
Sep 1, 2012 na5: 36 PM
Zvinoshamisa kuti munhu wese anoita seane chinamato chechitendero.
Panzvimbo pekutaura nyaya, pane chimwe chinhu chinofanira kutaurwa nekushandisa nzira dzekutaura nyaya kune bhizinesi kutaurirana.
Kana iwe ukacheka izvi kusvika pakati, ndezve kushandisa mutauro kuti uwane kutarisisa kana zvirinani asi unokwezva. Zviripachena, kutaurirana kunowira mune kwakatetepa quadrant kunogadzira maitiro kune rimwe divi remitambo.
Ndingati nharo yako musoro wenyaya inoshandisa nzira yekutaura nyaya yekutora chinzvimbo chekupokana.